एउटा पत्र प्रिय सहिदहरूलाई
प्रिय सहिदहरू, हुँदाहुँदा अहिले त सहिद भन्ने शब्दकै हुर्मत लिइएको छ । मैले सत्य लेख्नै पर्ने हुन्छ चाहे यहाँहरुले यो सत्यलाई सहजतापूर्वक ग्रहण गर्न असमर्थ रहेपनि । तर म निवेदन गर्न चाहन्छु, मेरो मनशाय यहाँहरुलाई चोट पुर्‍याउनु कदापी हैन । अब भएकै यस्तै छ यहाँ, म नलेखुँ कसरी ? सवारी साधनहरु सडकबाट नदीमा खस्दा मर्नेहरु हुन या सवारी साधनले ठक्कर दिएर सडकमा ठहरै हुनेहरु हुन, गुण्डागर्दीका क्रममा हुने गुण्डागुण्डाहरुबीच हुने मारकाटका बेलामा सिलटिमुर खाएकाहरु हुन या घरायशी झगडामा ज्यान गुमाएकाहरु हुन सबैसबैलाई सरकारी घोषणाबाट प्रस्टै पारिएको छ – उनीहरु सहिद हुन् । यो कस्तो बिडम्बना ? यसलाई यहाँहरु हाम्रा सम्माननीय शासकहरुको उदारता ठानेपनि ठान्नुस, वा राजनीति माने पनि मान्नुस् । यहाँ त प्रचलन बसिसकेको छ – कालगतीले बाहेक लडाईझगडा, कुटपिट, दुर्घटना वा विश्व रेकर्ड राख्ने सनकमा आगोमा "सेकुवा" भएर मर्नेहरु हुन उनीहरु सबैलाई सहिद भनिने गरेको छ । र, उनीहरुका परिवारलाई गोडा दशेक लाख पनि बक्सिस दिइने गरिएको छ – महान सपुत जन्माएकाले हुनुपर्छ सायद । अनी साँच्ची, अस्ति हुँदो जंगलबाट बौलाएर बस्तीमा पसेको “ध्रुबे” नामको हात्तिले पनि हामीलाई थप केही सहिदहरु दिएको छ । र, प्रिय सहिदहरु यहाँहरुलाई पछिल्लो जानकारी पनि गराईहालूँ, सत्ताबाट केहि समय बाहिर बस्न परेकोमा आपत्ति जनाउँदै केही दलहरु फेरि आन्दोलनको जेहाद छेड्दै छन अरे पक्कैपनि अरुकेहि थान सपुतहरु रोलक्रममै हुनुहुन्छ होला – सहिद बन्ने ! र, हामी जिउँदाहरु चाँहि त्यसैत्यसै गौरभान्वित भएका छौं – सहिदहरूको फस्टाउँदो उत्पादनको साक्षी बनेर । थाहा छैन कि यो सहिद उत्पादन कहिले बन्द हुने हो ! अहँ कसैलाई केहि हेक्का छैन र चासो पनि । मात्र यत्ति थाहा छ सबैलाई कि सहिदहरुको उत्पादन उत्साहजनक छ । अहिलेसम्मकै बिद्धान प्रधानमन्त्री संलग्न सरकार छ हाम्रो, आर्थिक समृद्धि र विकाशमा छलाङ मार्ने भाषणहरू थुप्रै आएका पनि छन्, ख्वै कतै सहिदहरुको निर्यातको विषयमा पनि केहि सोच्दै होला कि हाम्रो सरकार ?
प्रिय सहिदहरु, जुन कारण आफ्नो बलिदानी दिएका थियौ, त्यो हाम्रा लागि अझै अप्रयाप्य नै छ । हजुरहरु जुन अभिप्रायले गोली खान तयार हुनु भो, घाँटी सेराउन हिच्किचाउनु भएन त्यस्तो खास जनताको हितको ब्यवस्थाको आधार अझै बनेको छैन । एक हिसाबले यहाँहरुका लागि खुशीको कुरो पनि हुन सक्ला कि यहाँका सहधर्मीहरुले पालैपालो सत्ताको स्वाद चाखेकै छन् । तर अर्को हिसावले यहाँहरुका लागि यो अपशकुन कै कुरो हुन पर्ला कि उनीहरूले हिजो हजुरहरुसँगै युद्धमा कबल गरेअनुसारको समता, न्याय र समृद्धि दिन सकेका छैनन् । ख्वै, सत्ताको स्वाद पनि कस्तो हुँदो हो, रामजाने ! सधैं लुछाचुडी नै देख्छु म त ! लिसो झैं टासिरहन खोज्छन् उनीहरु ! दुःखका साथ लेख्दैछु कि यहाँहरुको बलिदानीले केही सिमीत मान्छेहरुलाई भब्य र आलिशान जीवनशैली त दियो तर आम गरिपगुरुवाहरुलाई परिवर्तनको केही छनक दिन सकेन । अझै पनि शोषण र उत्पिडनले जरो गाडिरहेको छ समाजमा । अकर्मण्यता, अराजकता, अराजनीति, दण्डहिनता, अन्याय र अत्याचारको त के कुरा भो र भष्ट्रचारले पराकाष्टा नाघीसक्यो ! शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचयन हाम्रा लागि आकाशको फल भएका छन् ।
हामीसँगै स्वतन्त्रको निर्बाध निश्वास लिन शुरु गरेका मुलुकहरु कहाँबाट कहाँ पुगिसके तर हामी जहिँको तहिँ नै छौं । फगत कोरा सपनाहरु मात्र छन् । तर, पूरा हुन्छन् भन्ने पूरापूर विश्वास बाँकी छैन । प्रिय सहिदहरु, निवेदन गर्न पनि लाज लागिरहेछ आफ्नै यथार्थ कि मिल्ने भए नागरिकता विनिमय गर्न लाखौं नेपालीहरुको सागर उर्लने थियो सायद । यो काल्पनिक कुरो गरिरहेको छैन म । किनकी, गीतमा गाएजस्तो “यो नेपाली शीर उचाली ... संसारमा लम्कन्छ ...” ब्यवहारमा बडो अप्ठेरो कुरो छ यो । हेर्नु न म आफै अवसरको खोजीमा विदेशिएको पूरै पाँच महिना भो’ । र, मैले यहाँको होटलरेस्टुँरामा ‘भाँडा मोल्ने, शौचालय सफा गर्ने वा भुँई पुछ्ने काममै मेरा उर्जाशिल युवावयका महत्वपूर्ण कालखण्डहरु व्यतित गरिरहेछु ! अब तपाइँहरु नै बताउनुस मेरा प्रिय सहिद – म ‘निम्छरो’ कसरी नेपाली भएका नाताले शीर उचालेर लम्कन सक्छु ? के आधारमा म मेरो व्यक्तित्व घगडान भएको रहर गर्न सक्छु ? यदि, यो यथार्थ पढेर हिक्का छुटेको छ यहाँहरुको भने, म पुनः विनम्रतापूर्वक अवगत गराउन चाहन्छु मेरा प्रिय सहिद कि यसरी अझै केहि वर्षहरुका प्रत्येक भोरहरुमा मेरो हिक्का निरन्तर छुटिरहनेछ । एकदम निरन्तर !